October 24, 2018 - PuraKhabar
प्रेम तामाङको सतकमा इण्डो नेपाल टि–२० सिरिजमा नेपालको कब्जा, भारतमाथि नेपालको तेस्रो सानदार जित
October 24, 2018 Purakhabar News
काठमाडौं । राजधानीमा चलिरहेको सिडब्लुटि इण्डो नेपाल अन्डर नाइन्टिन टि–ट्वान्टी मैत्रीपुर्ण क्रिकेट सिरिजमा नेपालले कब्जा जनाएको छ । बुधबार भएको निर्णयक खेलमा नेपालका कप्तान प्रेम तामाङले सतकिय पारी खेल्दा भारतमाथि नेपालले ४३ रनको सानदार जित निकालेको हो । राजधानीमा चलिरहेको टि–२० क्रिकेट सिरिजको चौथो खेलमा नेपालले जित निकाल्दै पाँच खेलको सिरिजमा तीन एकले सिरिजमा कब्जा गरेको हो । बुधबार दिउँसो काठमाडौ स्थित मुलपानीको माथिल्लो क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले २० ओभरको खेलमा पुरै ओभर खेल्दै ३ विकेटको नोक्सानीमा एक सय ९७ रनको गतिलो स्कोर…
निर्मला पन्त मर्नु अघिको यस्तो भिडियो बाहिरियो, भिडियो हेर्नु भयो भने तपाइको आखा रसाउने छन् (भिडियो)-
निर्मला पन्त मर्नु अघिको यस्तो भिडियो बाहिरियो : निर्मलाले गरिन रुदै यस्तो बिलौना गरेको भिडियो सामाजिक संजालमा भाईरल – भिडियो हेर्नु भयो भने तपाइको आखा रसाउने छन् (भिडियो)- For me, as I’m sure it is for many, the latter options for both the questions are definitely the way to go. Ultimately, everyone wants to move forward in life and actually go somewhere, rather than being hurt and stuck in the same place over and over again which gets them nowhere due to their inability to take criticism and work on…
निर्मला हत्याकाणड : रोशनी बमको आफ्नै कक्षा साथिले खोलिन बमको यस्तो पोल,हेर्नुहोस खुल्यो यस्तो रहस्य (भिडियो) Minister for Women, Children and Senior Citizen, Thamamaya Thapa, has said that the Constitution has stressed on women empowerment by giving high importance to women welfare. Minister Thapa said so while presenting Sixth Periodic Report of Nepal in the 71st meeting of the committee on the Elimination of Discrimination against Women in Geneva on Tuesday. ﻿ She said that the government has initiated the step for the protection and promotion of women rights and…
नेकपालाई धक्का दिन वैद्य माओवादीले थाल्यो यी पार्टीसँग एकीकरणका लागि वार्ता !!
काठमाडौ । क्रान्तिकारी माओवादीका उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले जनगणतन्त्र स्थापना गरे मात्र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा गजुरेलले संविधानमा दुई वर्षसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन नमिल्ने प्रावधान राखेर राजनीतिक दलहरुले गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप लगाउँदै ‘थुप्रै त्रुटि रहेको यो संविधानलाई‘ खारेज गरेर जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको, बजारमा महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, सुन तस्करलाई कारवाही नगरेको र निर्मला पन्तका हत्यारालाई पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै नेता गजुरेलले यो सरकार सफल भएको भन्ने ठाउँ नै नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । अर्को प्रसङ्गमा…
ललितपुर प्रकरणः अफिसमै सुन्दरीको चुम्बन, केही समयमा रोमान्स
-एक ठगले आफ्नो गुमराहमा पार्न अनेक प्रयास गर्ने गर्दछ । ठग्ने तरिका समेत नयाँ–नयाँ ल्याउने गर्दछ । यस्तै भएको छ, ललितपुरमा । ललितपुरको कुपण्डोलमा बस्दै आएका एक व्यवसायीको फेसबुकमा जेठ अन्तिम साता एक युवतीको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो । निशा अधिकारी नामको उक्त प्रोफाइलबाट आएको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट उनले एक्सेप्ट गर्छन् । केही समयपछि फेसबुक म्यासेन्जरमा सामान्य कुराकानी र चिनजान हुन्छ । यो क्रम दुई–तीन दिनसम्म चल्छ । ती युवतीले हरेक प्रयास गर्छन (प्रकाशलाई, नाम परिवर्तन) । सन्चो–बिसन्चोदेखि खाना खाएको र नखाएकोसम्म कुराकानी म्यासेन्जरमै हुन थाल्छन् । केही दिनको कुराकानीपछि दुई जनाबीच…
बलिउड अभिनेता बबी देओलको यस्तो छ लभ स्टोरी, मिडियामा आउन नचाहने उनकी पत्नी तान्या के गर्छिन् ?
एजेन्सी,२ भदौ । केहि समय देखि डिप्रेसनको सिकार भएका बहुप्रतिभाका धनि अभिनेता बबी देओल पछिल्ल्लो समय सलमान खानको फिल्म ‘रेस ३’ मा देखिएका थिए । डिप्रेशनले फिल्म दुनियाँबाट टाढा बसेका बबीको धरापमा परेको लाइफ श्रीमती तान्या आहुजाको कारण ठिक अवस्थामा आएका छन् । मुस्किलको समयमा आफ्नो श्रीमानलाई पूर्ण साथ दिएकी तान्या करोडौँको मालिक्निी हुन् । ४ वर्ष देखि फिल्म क्षेत्रबाट टाढा रहेका बबीलाई तान्याले पुर्ण अवस्थामा फर्काएकी छन् । तर बबीले अन्य कलाकारको जस्तो आफ्नो श्रीमतीलाई मिडियामा भने ल्याउन चाहेका छैनन् ।तान्या एक धनि परिवारकी छोरी हुन् । उनका पिता…
तीस वर्षदेखि राष्ट्रप्रमुखहरुले बेवास्ता गरेको एउटा माग, के राष्ट्रपति भण्डारीको ध्यान जाला ?
भक्तपुर– बडादसैँको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमाको अवसरमा भक्तपुरको प्रसिद्ध नवदुर्गा भवानीको मन्दिरमा राष्ट्रप्रमुख आउने गरेको तीन दशक भयो । वि.सं. २०४५ सालमा तत्कालीन राजा स्वर्गीय वीरेन्द र २०५८ पछि ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले दर्शन गर्न आएका थिए । गणतन्त्र आएपछि प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आउन थालेको चारवर्ष पुरा भएको छ । तर विगतदेखि नै नवदुर्गा जात्रा व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रप्रमुखमार्फत सरकारलाई राखेको माग पुरा हुन नसकेको समितिका अध्यक्ष बृजेश वनमालाले बताए । ‘यो सांस्कृतिक पर्व मनाउन चाहिने विभिन्न कुरा र आर्थिक पक्ष जुटाउन निकै कठिन छ,’ उनले…
अभिभावकको लापर्वाहीले दुई बालकको ज्यान गयो
७ कार्तिक, लुम्बिनी । आ आफना बालबच्चालाई अभिावकले राम्रो सँग हेरचाहमा ध्यान नपुरयाउदा छुट्टा छुट्टै घटनामा परि रुपन्देहीमा दुई बालकले ज्यान गुमाएका छन । ईलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीले दिएको जानकारी अनुसार अभिभावकको लापर्वाहीले लुम्बिनी साास्कृतिक नगरपालिका वडा नं. ६ मोहसड स्थित छतमा खेल्ने क्रममा तीन बर्षीय शिवकरन बिश्वकर्मा फलामे छण माथि ढल्दा घाँटी र पेटमा घोचिदा मेडिकल कालेज भैरहवामा कार्तिक २ गते उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । दशै मनाउन मामाघर आएका निज बालकको अभिभावकको लापर्वाहीले मृत्यु भए पछि बालबच्चालाई जथाभावी जानबाट अन्य अभिभावकले सचेत हुनुपर्ने लुसाँनपा ६ का वडा…
‘राष्ट्रपति भण्डारी आमा सरह हुन् टीका थाप्दा झूक्नु स्वभाविक रुपमा लिए’- नायिका करिष्मा !!
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट टीका ग्रहण गर्दा केही व्यक्तिले घुँडा टेकेको तस्वीरले यतिबेला सामाजिक संजालमा भाईरल बनेको छ । सोहि फोटोलाई लिएर सामाजिक संजालमा बिभिन्न किसीमका टिकाटिप्पणी, आलोचना समेत भैरहेका छन् । शितलनिवासको ब्यवस्थापन फितलो, त्यो अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीको शिर किन झुकेन ? लगायतका बिषयमा धेरै टिकाटिप्पणी गरेका छन् । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले घुँडा टेकेको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी शुरु भएको हो । यसैक्रममा नयाँ शक्ति पार्टीकी नेतृ एवं नायिका करिष्मा मानन्धरले सामाजिक संजालमा एक स्टाटस् लेख्दै आफ्नो धारणा राखेकी छिन् । उनले राष्ट्रपति आमा समान रहेको बताउँदै आमाको अगाडि…
निर्मला हत्या काण्डले फेरी लियो काठमाडौंमा उग्र रुप (हेर्नुहोस भिडियो )
देशकै ध्यान खिचेको निर्मला पन्त हत्याकाण्डले अहिले ३ महिना नाघिसकेको छ । गत साउन ४ गते कञ्चनपुरमा १३ बर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । हत्या आरोपमा एक महिनापछि भदौ ४ गते प्रहरीले दिलिप विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो। तर उनी वास्तविक हत्यारा नभएको भन्दै कञ्चनपुरमा आन्दोलन चर्कियो र त्यसको देशभर समर्थनसहित विरोध प्रदर्शन पनि भयो प्रदर्शनका कञ्चनपुरमा एकजनाले ज्यानन गुमाए भने कैयौं घाइते पनि भए । घटनामा अहिलेसम्म अपराधत्री पक्राउ नपर्दा प्रहरी र सरकारको कार्यशैलीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सरकारले विभिन्न थरीका अनुसन्धान समति बनाए पनि कुनैले पनि…